Amacandelo ama-7 amaQhinga okuThengisa akhuthaza ukuthembana kunye nokwabelana | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 3, 2016 UAlex Membrillo
Olunye umxholo luthanda ukwenza ngcono kunabanye, ukuphumelela izabelo ezininzi kunye nokuguqulwa okungakumbi. Eminye imixholo ityelelwa kwaye kwabelwane ngayo kaninzi-ninzi, izisa abantu abaninzi nangakumbi kwi-brand yakho. Ngokubanzi, la ngamaqhekeza aqinisekisa abantu ukuba uphawu lwakho lunezinto ezifanelekileyo onokuzithetha kunye nemiyalezo abanokufuna ukwabelana ngayo. Ungabuhlakulela njani ubukho kwi-Intanethi obonisa amaxabiso aphumelela ukuzithemba kwabathengi? Khumbula ezi zikhokelo xa usenza iqhinga lokuthengisa umxholo:
Bonisa ubuchule bakho
Enye yeendlela ezilungileyo zokuphumelela ukuthembela kubathengi kukubonisa ukuba, ukuba bayakukhetha, baya kuba sezandleni ezifanelekileyo. Yenza umxholo obonisa ukuba uqhelene kakhulu nomzi mveliso wakho. Bhala izithuba malunga nezona ndlela zintsha zakutshanje. Chaza ukuba kutheni enye indlela ibhetele kunenye. Yenza uluhlu lwenqaku olubonisa iimpazamo eziqhelekileyo kunye nendlela yokuziphepha. Ezi ntlobo zamaqhekeza zibonisa ithemba lakho lokuba uyazi ukuba uthetha ngantoni kwaye unokwethenjelwa ukuba ubenzele kakuhle.
Yenza umxholo ophendula iimfuno zabafundi
Xa abantu beqala ukujonga umxholo okwisiza sakho, kuhlala kungenxa yokuba banombuzo othile abafuna ukuphendulwa. Yenza umxholo onokuyiphendula imibuzo nethemba lakho kwaye unokubanceda baqonde indlela yokusombulula iingxaki zabo. Umzekelo, kusenokwenzeka ukuba umntu ohlangabezana nemicimbi yomoya opholileyo kungenzeka ukuba afunde kwizizathu eziqhelekileyo zokuba umoya opholileyo ayeke ukuvuthela umoya opholileyo ngaphambi kokuba aqale ukuzama ukukhetha inkampani ye-HVAC ukuba iphume ize isebenze inkqubo yayo . Ngokuba nguwe oza kuphendula umbuzo wakhe, ubonakalisile ubungcali bakho kunye nokuzimisela ukumnceda kumba wakhe.
Abantu kunokwenzeka ngakumbi ukuba bathembele kuhlobo olunikezela iimpendulo kwimibuzo eqhelekileyo ngendlela ethe ngqo neluncedo, ngaphandle kokwenza iscroll ngasinye kwiitoni zomxholo ukufumana into abayifunayo. Ngokunika abathengi bakho into abaza kuyifumana kwindawo yakho, unokuyenza ukuba, ukuba banokufuna imveliso okanye inkonzo, eyakho iya kuba yeyabo bayikhethayo.
Sukubaxelela nje; Babonise
Qinisekisa ukuba unakho ukuxhasa naliphi na ibango olwenzileyo. Umzekelo, sukutsho nje ukuba unawona manqanaba okhuphiswano kwindawo yakho. Yenza itshathi okanye infographic ethelekisa amaxabiso akho kwabo ukhuphisana nabo '. Sekela amabango olwaneliseko oluphezulu lwabathengi ngezicatshulwa ezivela kubungqina obuvela kubathengi abonwabileyo. Ibango elingenanto ngaphandle kwayo nayiphi na into yokuyixhasa kusenokwenzeka ukuba ingahoywa okanye, okubi ngakumbi, ukwenza ukuba umfundi azive ekrokrela. Ukuba uyakwazi ukuxhasa onke amabango owenzayo ngobungqina, oko kubonisa ukuba uthembekile kwaye ukulungele ukuthembakala kwabo kunye neshishini labo.
Bonisa Abafundi Ukuba Uyabaphulaphula
Imithombo yeendaba ekwi-Intanethi yintlalo ngokwendalo. Sonke sineebhokisi zethu zesepha, nokuba abaphulaphuli bethu liqela lamawaka okanye isangqa esincinci sosapho kunye nabahlobo. Xa uposa kwi-intanethi, uyancokola. Bonisa amathemba akho kunye nabathengi obamameleyo njengokuba uthetha.
Jonga iindlela zakho zentlalo ngokukhankanywa kwegama lakho. Funda amagqabantshintshi kwiiblogi zakho. Jonga ukuba yintoni abantu abonwabileyo ngayo kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ayisiyiyo. Xa kufanelekile ukwenza njalo, jongana neenkxalabo zabathengi kwibhlog yakho okanye kwiziteshi zakho zenethiwekhi. Xa abantu bebona ukuba uphawu luyaphendula, kunokwenzeka ukuba bazive bekhuselekile ekunikezeleni olo phawu kwishishini labo.
Yazisa ngobungqina boluntu
Xa sibona ukuba abanye, nokuba ngabantu esingabaziyo okanye esinabo, banamava amahle ngophawu, kunokwenzeka ukuba siwathembe amazwi abo kunamabango angoqobo. Khuthaza abasebenzisi ukuba bashiye uphononongo kwaye bacaphule oku kumxholo wakho xa kufanelekile. La magqabantshintshi avela kubathengi bokwenyani angenza ukuba abanye bazive bekhululekile ekuthatheni nasekuqhubeni ishishini ngophawu lwakho.
I-BuzzSumo ihlalutyiwe Izithuba zentsholongwane zika-2015 kumanethiwekhi afaka i-Twitter, i-Facebook kunye ne-LinkedIn. Kwaye, ezinye zezona zidume kakhulu zezo zinento ethile yeemvakalelo. Abantu basabele kakuhle kwizithuba ezazibandakanya amabali afudumezayo kunye namabali amnandi ngabantu. Kwakhona babenokwabelana ngamabali ayenempikiswano okanye othusayo ngandlela thile.
Xa usenza umxholo weshishini lakho, cinga ngendlela enokubangela ngayo ukuba abafundi bakho bazive. Ngaba kunokwenzeka ukuba banomdla okanye bahlekise? Ngaba baya kuchonga abantu ebalini? Ezi ntlobo zeempendulo zenza ukuba iminikelo yakho yokuziva izive ifanelekile kwaye ibe yeyakho. Ezi ziindidi zamabali anokufumana izimvo kunye nezabelo.
Ngaba uphawu lwakho lusebenza nomthengi ngamnye okanye amashishini amancinci? Ngaba bakho abathengi abathi iimveliso okanye iinkonzo zakho zibe luncedo kubo ngendlela ephambili? Ngaba unabathengi ababalaseleyo ngokwabo? Cinga ngokwenza ividiyo okanye umxholo webhlog malunga namabali abathengi. Ukujolisa kumntu ngamnye kunika abantu umntu abanokuvana naye. Abayi kuyibona imveliso yakho ebomini bakho ukuba ubanika nje uluhlu lweempawu. Ngokubonisa ukuba incede njani okanye iphucule imisebenzi yomntu yemihla ngemihla, unokunceda abathengi bakho babone indlela imveliso yakho enokuba luncedo ngayo kubo.
Xa umxholo wakho kwabelwana ngawo, ufumana uphawu lwakho phambi kwabathengi abanokubona ngenye indlela. Kwaye, ufumana ubungqina boluntu obuvela kwiingcebiso zakho. Uninzi lwabantu lubona ngokugqithiseleyo xa kuziwa kumxholo abelana ngawo. Emva kwayo yonke loo nto, eso sabelo kukuvuma okungagungqiyo kokuqulathwe ngumxholo wakho. Ngokwenza umxholo ovusa umdla kunye neemvakalelo ngelixa ubonakalisa ukuba uphawu lwakho lufanelwe kukuqwalaselwa kunye nokuzithemba kwabo, unokonyusa izabelo zakho, wakhe ubudlelwane obuqinileyo kwaye ubone isibonelelo somxholo oguqukayo.
tags: UkuThengiswa kweMpahlaizabelo zomxholoimvakaleloubuchuleyandisa izabelo zentlaloyandisa ukuthembanakhuthaza ukuthembanaphu laphulesiquisabelobaboniseubungqina boluntubaxelelethemba
UAlex Membrillo yi-CEO ye Isisombululo seWebhusayithi, Ibhaso eliphumelela iarhente yentengiso yedijithali esekwe eAtlanta, GA. Umbutho obizwa ngokuba yiTekhnoloji yoMbutho waseGeorgia (i-TAG) ye-2015 ye-Digital Marketer yoNyaka, indlela yakhe yokuthengisa kwintengiso yedijithali itshintshe ishishini kwaye yahambisa iziphumo ezimangalisayo kubathengi babo bonke ubungakanani kunye neemarike. Ikhadinali ibinamaxesha ama-3 ngokulandelelana ebizwa ngegama kwi-Inc.